ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အဘယ်နည်း။ ခရစ်ယာန်တို့သည် မည်သည့်အရာကို ယုံကြည်ကြ သနည်း။?
ေမးခြန္း: ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အဘယ်နည်း။ ခရစ်ယာန်တို့သည် မည်သည့်အရာကို ယုံကြည်ကြ သနည်း။?
အေျဖ: ၁ ကော၊ ၁၅း၁-၄ တွင် “ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါသည်သင်တို့အား ဟောပြောဘူးသည့်နှင့်အညီ၊ သင်တို့သည် ခံယူ၍မှီဝဲဆည်းကပ်သော ဧဝံကလိတရားကို သင်တို့အားတဖန် ငါကြားလိုက်ပါ၏။ အထက်က ငါဟောပြောသည့် အကြောင်းများကို သင်တို့သည် အကျိုးမဲ့မယုံပဲ စိတ်စွဲလမ်းလျှင်၊ ထိုဧဝံကလိတရားအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ ငါသည် ကိုယ်တိုင်ခံယူသည်အတိုင်း၊ သင်တို့အားရှေ့ဦးစွာ အပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟူမူကား၊ ခရစ်တော် သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏ သဂြိုလ်ပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း သုံး ရက် မြောက်သော နေ့၌ ထမြောက်တော်မူ၏။
ခရစ်ယာန်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် တန်ဖိုးရှိသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးထဲတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရန် ကြိုးပမ်းသောဘာသာထက်သာ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ “လုပ်ရန်” “မလုပ်ရန်” ဟူသောတရားများကို လိုက်လျှောက်မည့်အစား ခရစ်ယာန်တို့၏ပန်းတိုင်သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင််နှင့်နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာဖွဲ့ခြင်းသည် ခရစ်တော််ပြုခဲ့သော အမူအရာအားဖြင့်ဖြစ်စေ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တောအားဖြင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ အမူတော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာဖွဲ့ နိုင်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် မှုတ်သွင်းခြင်းခံသောစာအုပ်၊ မှားယွင်းခြင်းမရှိသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ သွန် သင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသော အခြေခံမဏိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုခရစ်ယာန်များက ယုံကြည်သည် (တိ၊ ၃း၁၆၊ ၂ပေ၊ ၁း၂၀-၂၁)။ ဘုရားတစ်ဆူထဲတွင် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး၊ ခမည်းတော၊် သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အဖြင့် တည်ရှိသည်ဟု ခရစ်ယာန်များက ယုံကြည်သည်။
လူသားသည် ဘုရားသခင်က သူနှင့်အတူမိတ်သဟာရဖွဲ့ရန်အတွက် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခရစ်ယာန်များ က ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်အပြစ်ကြောင့် လူသားတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်ခွဲခွာခဲ့ရသည် (ရောမ၊ ၃း၂၃၊၅း၁၂)။ ခရစ်တော် သည် ဤလောကတွင် အသက်ရှင်ခဲ့ကြောင်း၊ စစ်မှန်သော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း လူသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း (ဖိလိ ၂း၆-၁)၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်များက ယုံကြည်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် အသေခံပြီးနောက် သဂြိုလ်ခြင်းခံ၍ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ယခုအချိန်တွင်ခမည်းတော်၏လက်ယာဘက်၌ထိုင်၍ ယုံကြည်သူများအတွက် အမြဲ တမ်းဆုတောင်းပေးသည်ဟု ခရစ်ယာန်များက ယုံကြည်သည် (ဟေဗြဲ ရး၂၅)။ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်အသေခံ ခြင်းသည် လူသားအားလုံး၏ပြစ်ကြွေးဟူသမျှကိုပေးဆပ်ရန် လုံလောက်သည်။ ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းကြောင့် ပျက်ဆီး သွားခဲ့သော ဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့၏ မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းကို ပြန်လည်ရယူစေခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ၊ ၉း၁၁-၁၄၊ ၁ဝး၁၀၊ ရောမ ၊ ၅း၈၊ ၆-၂၃)။
ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်ပြုခဲ့သောအမူကို လုံးလုံးလျားလျားယုံကြည်ရမည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွနု်ပ်ကိုယ်စားအသေခံ၍ အကျွနု်ပ်၏ပြစ်ကြွေးဟူသမျှပေးဆပ်ကာ သေခြင်းမှထမြောက်သည်ဟု လူ တစ်ယောက်သည် ယုံကြည်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်။ လူတစ်ယောက်သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက် ကြိုးပမ်း အားထုတ်၍မရပေ။ ဘုရားသခင်စိတ်တော်ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် မည်သူကမျှ မကောင်းမြတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် လူသားအားလုံးအတွက် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည် (ဟေရှာ ၅၃း၆၊၆၄း၆-၇)။ ဒုတိယအနေဖြင့် နောက်ထပ်ဖြည့် စွမ်းဖို့ရန်အတွက် မလိုအပ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်က လုပ်ဆောင်စရာအားလုံးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည်် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသောအခါ အမူပြီးပြီးဟုပြောခဲ့သည်။ (ယောဟန် ၁၉း၃၀)
ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက် လူတစ်ယောက်သည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတစ်ခုမျှမရှိပေ။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ် တော်ပြုခဲ့သောအမူကို တစ်ခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှုံးခြင်းမရှိနိုင်သော ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော ခရစ်တော်က အမူအားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံစွာပြုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူများသည် သူတို့၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပေ။ (ယောဟန် ၁ဝး၂၇-၂၉) ထဲတွင် ငါသိုးးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနားထောင်၍ ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထို့သိုးတို့ကိုငါသိ၏ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ထို့သိုးတို့သည် ဖျတ်ဆီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပျက် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်းတော်၏ လက်မှမနှုတ်မယူနို်င်ပေ။
တချို့သောသူတို့က “တစ်ကြိမ်ကယ်တင်ခြင်းရလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရှုံးဆုံးနိုင်တော့မည်မဟုတ်သောကြောင့် ကျွနု်ပ်သည် စိတ်ကြိုက်ပြုနိုင်သည်။ မည်မျှပင်ကောင်းမြတ်သနည်း” ဟုပြောနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကယ်တင်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးသည်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ရန်အတွက် မဟုတ်ပေ။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက် ကျွနု်ပ်သည် ဇာတိဟောင်းကိုရွေး ချယ်၍ အသက်ရှင်နိုင်သည်။ (သို့) ဘုရားသခင်နှင့်စစ်မှန်သော မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းကို ရွေးချယ်၍လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဘဝဟောင်းတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်တရား၏ကျွန်ဖြစ်၍ ယခုတွင်ခရစ်တော်၏ကျွန်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည် (ရောမ၊ ၆း၁၅-၂၂)။ ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် အသွေးအသားနှင့်ဤလောကတွင် အသက်ရှင်သောကြောင့် အပြစ်တရားနှင့်အမြဲ တမ်းရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် မိမိအသက်တာ၌ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလေ့ လာ၍အသက်တာတွင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်တရားကို အောင်မြင်စေနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကို ဦးဆောင်စေခြင်းသည်ကျွနု်ပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီတိုင်း၌် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ််တော်၏တန်ခိုးတော််အားဖြင့် နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို နာခံခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက် တွင် အသက်ရှင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ထို့ကြောင့် များစွာသောဘာသာတရားတို့သည် လူတစ်ယောက်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်အရာများဟူ၍ စည်ကမ်း ချက်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။ သို့သော် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ကျွနု်ပ်၏အပြစ်အတွက် ခရစ်တော်သည် ကားတိုင်တော်ပေါ် တွင်အသေခံ၍ ပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ၏အပြစ်ကြွေးကို ပေးဆပ်ပေးခဲ့ပြီ။ မိတ်ဆွေ သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာဖွဲ့နိုင်သော အခွင့်ရှိသည်။ မိတ်ဆွေသည် မိတ်ဆွေ၏အပြစ်တရားပေါ်တွင် အောင်မြင် ခြင်းအခွင်ရှိ၍ ဘုရားသခင်ကို နာခံခြင်းနှင့်မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာ နှင့်ညီညွတ်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်သည်။